Alessandro Del Piero Oo Sheegay Laba Xiddig Oo Uu Daawan Doono Qaab Cayaareedkooda %
Xiddigii hore Kooxda Juventus ee Alessandro Del Piero ayaa shaaca ka qaaday Xiddigaha uu jecel yahay in uu daawado qaab cayaareedkooda xilli cayaareedkan xiddigaha ugu fiican adduunak sanadihii ugu dambeeyay ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
Alessandro Del Piero ayaa sheegay in uu jecel yahay in uu daawado xilli ciyaareedkan xiddigaha Paulo Dyabala iyo xiddiga kooxda PSG ee Klyain Mbappe.
Halyeeyga kooxda Juventus ayaa diiday in uu xiddigaha Dybala iyo Mbappe bar-bar dhigo xiddigaha Ronaldo iyo Messi isaga oo shegay in ay labada xiddig ee da,yarka leeyihiin tayo ka fiican labada xiddig.
Alessandro Del Piero oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri Xiddiiga Ronaldo iyo Messi waxa ay leeyihiin tayo ay ku soo bandhigaan qaab ciyaareed fiican laakiin waxa aan sugi laayahay qaab cayaareedka Dybala iyo Mbapp”.
Labada laacib ee da,yarka ah ayaa la filayaa in ay qaab cayaareed heer sare ah la qaataan kooxaha Juventus iyo PSG kooxohoodana ku hogaamiyaan ku guulaysiga koobab badan.